Nagarik News - सिन्धु पुनर्निर्माणमा तीन सय प्राविधिक
07 May 2016 | 07:56am
भवन डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख डा. युवराज पौडलले शुक्रबारसम्म ९५ जना इन्जिनियर हाजिर भइसकेको बताए। 'दरबन्दी रहेका गाउँ गएर उनीहरूले काम थालिसकेका छन्,' उनले भने। उनका अनुसार दरबन्दीबमोजिम १ सय ६५ इन्जिनियर तथा बाँकी सब–इन्जिनियर र सहायक सब–इन्जिनियर खटिनेछन्। प्राविधिक सिभिल र आर्किटेक विधाका हुन्। गाविस, केही गाविस समेटिएर बनाइने स्रोतकेन्द्र र भवन डिभिजन कार्यालयमा रहने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गरी तीन तहमा रहेर प्राविधिकले काम गर्ने छन्।
जिल्लामा दुई (चौतारा, मेलम्ची) नगरपालिका र ६८ गाविस छन्। प्रतिगाविसमा एक/एक इन्जिनियर र सहायक सब–इन्जिनियर (सब–ओभरसियर) को व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकामा तीन जनाका दरले इन्जिनियर खटिने छन्। आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा इन्जिनियरसहित ६ प्राविधिको दरबन्दी कायम गरिएको छ। गाउँ तहमा तीनदेखि ६ गाविस समेटेर स्रोतकेन्द्र व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले २० स्रोतकेन्द्र बनाउन सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिफारिस स्रोत केन्द्रलाई स्वीकृत दिनुपर्ने छ। पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण र सघाउने केन्द्रमा चार/चार जनाको दरले इन्जिनियर र सब–इन्जिनियर खटिने डा. पौडलले बताए। केन्द्रमा आठ र गाविसमा दुईजना दरले प्राविधिक परिचालित हुनेछन्। 'आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणदेखि जग बसाल्ने र घर निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्म उनीहरूले निगरानी गर्ने छन्,' उनले भने। गाविसमा खटिने प्राविधिकले अनुदान सम्झौता गर्दादेखि नै प्राविधिक परामर्श दिनेछन्।
जग हाल्नेदेखि घरको धुरी मार्ने बेलासम्म प्राविधिकले सहयोग गर्ने पौडेलले बताए। 'दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान रकम प्राविधिककै सिफारिसमा पीडितले पाउने छन्,' उनले भने, 'राष्ट्रिय भवनसंहिता अनुसार भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउन उनीहरूको सहयोग रहने छ,' तीन चरणमा वितरण हुने २ लाख रुपैयाँ आवास निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता भने सम्झौतापछि सिधै पीडितको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भूकम्प प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रका लागि ढुंगा, माटो, बाँस, काठपात, इटा र सिमेन्टबाट बन्ने १७ प्रकारका भवन डिजाइन तयार पारेको छ। पीडितले तीमध्ये कुनै एक रोज्ने छन्। उपलब्ध डिजाइन मन नपरे पीडितले प्राविधिकको सहयोगमा आफूले चाहेको डिजाइनमा घर बनाउन पनि सक्ने डिभिजन प्रमुख पौडेलले बताए।
गाविस र स्रोतकेन्द्रमा खटिने प्राविधिकले सचिवसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने छ। प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यो अवधिसम्म प्राविधिक खटिएका क्षेत्रमा रहनेछन्। असार मसन्तसम्मको नियुक्ति दिएर करारमा प्राविधिक खटाइएको हो। करार थपिँदै जाने छ।
स्रोतकेन्द्र, क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्यालय गरी प्राधिकरणको तीनवटा संरचना व्यवस्था गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक सर्वाधिक क्षतिग्रस्त रहेकाले यहाँ विशेष कार्यालय स्थापना गरिएको छ। विशेष कार्यालयले स्रोतकेन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयबीच समन्वय गर्ने छ। सिन्धुपाल्चोकसहित काभ्रे र सिन्धुली हेर्ने प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय धुलिखेलमा छ।
पुनर्निर्माणमा सघाउन भूकम्प प्रभावित सम्बद्ध जिल्लाका सांसद रहेको एक समन्वय समिति बनाइएको छ। त्यस्तै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा सदस्य सचिव रहने स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्को उपसमन्वय समिति व्यवस्था गरी प्राधिकरणले पुनर्निर्माण काम बाँडफाँड गरेको छ। 'सिडिओले समग्र पुनर्निर्माणको रेखदेख, अनुगमन, समन्वय र आवश्यक निर्देशन गर्ने छन्,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीले भने।
नगरपालिका र सहरी क्षेत्रका लागि घरसंरचनाको डिजाइन तयार नभए पनि पुनर्निर्माण नरोकिने भएको छ। भवन विभागले ग्रामीण क्षेत्रका लागि १७ प्रकारका घर डिजाइन तयार गरे पनि सहरी क्षेत्रका लागि तयार पारेको छैन।
सहरी क्षेत्रमा भवनसंहिता अनुसार विद्यमान मापदण्ड पूरा गरी पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन सकिने डिभिजन कार्यालय प्रमुख पौडेल बताउँछन्। 'डिजाइन तयार छैन भनेर रोकिनु पर्दैन,' उनले भने। उनका अनुसार नगरपालिका, सहरी क्षेत्र र सदरमुकाममा विद्यमान (साबिक) मापदण्ड र भवनसंहिता अनुसार संरचना बनाउने बाटो खुला छ। 'सहरी क्षेत्रका लागि पनि केही डिजाइन बनाउनु आवश्यक छ भनेर विभागमा भनेका छौं,' पौडेलले भने।